shashe-spritual - Ethiopia video sharing site
Aug 17, 2016 by Dibabe Hope Newman / 274 Views
Kennaa fi dandetii
Aug 3, 2016 by Beniam / 350 Views
Kennaa fi dandetii nuuf kename hala akkamitin gutuman Gututti itti fayyadamu dandena. Kenna waqayyo nuuf kennenis akkamiti amanama tana?
Yeroo ani kutaa 5ffa baradhuu tapha gababa(drama) mana barumsa kenati qophessuf barataaa turee. Ani garuu fedhiin kiyya diramicha irratti dura bu’aa ta’ee taphachuu fedha ture. Garu bakke sani mucayoo biratuu akka taphatu filatamera. Tari filannonis kan rawwate barsiftu tenyani. Mucayoon suni taphachuu dadhabde akka filatamu fedhi qaba turee. Fedhii irra kana darbe ,utun filatamele wanti ani bekuu hin turee , wanta mucayoon beektus hin bekku turee.
Fedhii gudda qabachun allatti bakke sanifi ofi qophesse hin ture. Wantota jedhamu qabus matati hin qabane. Osoo filatemeyuu bakke sani tapachuu hin danda’u ture.
Waqayyoo nuu tenyee wanta ta’uu barbanuuf wanta dalagu barbanu haa abjanu hin barbaduu. Goftani Abjuu kenna garaa rawwititi akka fidnu barbada. Hundumtii kenyaa dandetifi kennaa itti hin fayyadamne bayye ofi kessa qabna. Kenna itti hin fayyadamne kana guddisufi , Amantin kannee carraa nuuf kenname hunda gutumman gututi itti fayyadamu qabna. Bayina kenna dandetti qabnu utu hin tanee , kenna qabnut fayyadamudha wanti guddan. Me dhuguman kennaa siif kenameti gutuman gututi itti fayyadamera jetta ?yoo fayyadamte eeyee fayyadamera jedhi jalati yaada kenni.
Waqayyo sababi kenna sif kename itti fayyadamu dhabde akka itti himtu hin barbadu ( gonkuma sirra hin dhagayuu).
Waqayyoon hagam akka offit gaddinu itti himu miti akka inni nuuf birmatu isaa tasisu. Kan waqayyo akka nuu gargaru tasisu Amantidha(faith). Amantidhani kane kenna nuuf kenamef dandeti qabnuti yoo fayyadamne , kuni waqayyotti akka amane mudhisa , kana jechuun akka galma gayuu dandenuu waqayoo akka nu gargaru amanti akka isaati qabnu itti agarsisa.
Yeroo tokko tokkoo waqayoo carra bayee salpha fakkatuu nuuf kennaa, Tari carra bayee hin barbachifne fakkatu danda’a. Kuni ammo carran kunin halaa kamin kayyoo kessani isaa guddichaa isin gessuu hubachuuni bayye namati ulfataa. Waqayyo garuu wanta wayi akka dalagnu barbada, Waqayoo karoraa itti qaba wanta hundafi. Carra xino nuuf kenamen wanta garii yoo dalagne waqayyoo carra kenna badhisa dema garaa sadarka guddati nu gessa itti gafatamuma guddas nuuf kenna.
Kennaa nuuf kenname qarominan itti fayyadamu qabna yeroo birra utu hin tanee Amman tana( right now)
Farafataa yoo ta,uu barbadani tetani campanin guddan hagga isini bilbile isni wamuu hin egina ka’a kuwayeri kessa sennaa. Fedha barsisa ta’uu yoo qabatani cadhiftan hin ta’inaa ka’aa da’iman barsisu jalaqaba. Garumafi fayyaluma waqaa itti himaa. Hagga asi yoo dubbifate kenna naaf kenneef waqayyon hin galatefadha jedhi Kommeti godhi.
Wanta hamam fedhee gudda ha ta’uu waqayoo yeroo carra isini kenuu dandeti dirqamichaa isinif kename akka batanis waluma isinif kena kanafi kena waqayoo isinifi kenneti Amanatin bayudhani itti fayyadama. Waqayoo yeroo hunda isini wajin jiraa. Ammanti dhaan.
Aug 2, 2016 by Beniam / 339 Views
Nama jalanu tokko mishaa isa malee bada isaa irratti xiyyefachuu dhabuu.
Yeroo tokko sena abba mana fi hadha mana tokko dhagayeen turee, Hasawa gababadu irratti wali dhabani turani hasaya sana boda , walin hodani turani ( wal dubbisu didani turani). Isaani lammenu dura dubbisu hin barbane. Abban mana ganama subi sa’aa 12:00 ka’uu qaba turee kanafi hati mana wanta asin duraa kaftuf , afanin itti dubachuu wanta hin hinfenef , waraqa diqoo irrati “ganama sa’aa 12:00 na kasi “jedhee barresse kayefi rafe.
Guyya itti anuu ganama yeroo abban mana ka’u sa’aan 2:00 ta’era , Guddise aridhaan isaa jirti isheen jedheeti yeroo ka’uu isheenis waraqaa cituu irratti , “sa’aan 12:00 ta’eera ka’ii” jettee barressite bira ketefi turtee.
Yoo jalalan jirachuu barbane walif dhifama gochuu barachuu qabna. Macaafa qulqullu kessati “ Ari kessani irratti lafti akka isinitti hin dhine wanta hundayu callaa jalala irra kaya ” kana jecuhuun.
Karaa mataa kessani demu , ykn ajendaa mataa kessani irra jalala dursaa jechuudha. Efesoni 3:17 irrati phawulos:” Hundi kenna jalala irratti yoo ijarmane hundi kenyaa humna qunqulota qabana jedha” Yeroo jalalan walin jirachuu filanuu, humnafi gargarsaa Gofta argana hunda irra walitti dhufenyaa Gari qabana.
Hundumti kenyaa nama jalanu kessatti wanta garii isaani Dalagani male wanta hamma isani rawatani irratti xiyyefachuu hin qabnuu. Wanti tokko kan abba mana kiyya irra jaladhu tokkoo wantota hamma namoni dalagani hin argu nati fakkata , Garuu arguu dhabee otuu hin tane. Wanta hamma namni dalagu irratti xiyyefachuu dhabudhafi.
Kanuma Goftan yesuus kiristos kan nu barsise , bakke farisoni bayyeen wali gayaniti dubarti sebara irrati qabamte qabani itti fidani. Seri yeroo sani turee Dhakkadhaan rebamte haajjefamtu kan jedhuu turee. Goftan dalagaa isheetiif itti hin dheekamne. Garuu farisotani “ Namoni isini kessaa qulqullu ta’ee dhakka isaa duraa isheet haa darbatuu “ jedheen.
Namoni hundumti ofi isani kessa lalu jalqabane dubartis dhisani deman.Hundumti kena rakkina nama lalufi dhakka darbachuu hin dadhabnuu garuu, Namota birrafis hayama kenufi qabna namotni kunin rakkina isaan kessa darbani hin benuu. Rakkina issan qabanis hin hubanuu. Midhama onnee fi rakkina isaa irra jiruu hin beeknu.
Goftani namoni dubartiti himatani hagaa deemanin booda “Anile siti hin dhekamuu , deebite cubuu hin hojjatin ka’ii demi jedheeni”
Mee jalalan walin deemu habaranu , Mani qoqodame wanta kufufi , Mana kenyaa kessanti nagaa qabachuun bayee barbachisa. Dhifama gaffachuuf nama isaa jalqaba ta’aa. Dhifama namaf godhuuf arifadha.
Hamma iddo kana yoo dubisate atuu obsa qabada , “ obsa qaba jedhi comment godhii jalati”
Namni wayi al tokkoo gafi na gafatee turee , ati abba mana kee walin waliti dubatuu ? Dhuguma waliti dubana garuu , Abban mana kiyya jalalan akka walin deemnuf sammu isaa wanta amansiseef , waliti hin bunuu , wati irratti wali hin galee yoo hin jirane irratti akka wali hin gali wali gale walin demna garuu , yeroo tokko tokkoo yoo dogongori kan isaa ta’ee bayee tokkoo obsa kiyya dhabaa. Yeroo anafi abban warra kiyya walifune , ani wanta offi dalaguuf tahu inuman dalaga wanti hundi karaa kiyyan akka rawwatu barbada , garuu yeroon booda waqaayyoo nati dubatee. Halaa kiyya kana yoo hin jijjire abba mana kiyya gara nama badati akka issa jijjiru naaf hubatame. Abba mana kiyya guddise jaladhaa. Amali isaas akka jijjiramu hin barbane. Kanafi amala kiyya kessa wanta jijjiru qabu hunda sirrese.
Ademsa jalala kessatti namoni yeroo murasan booda Jalalan akka walin deemu qabana hin dagatani. Kana booda onnen isaani akka jijjirame hubatani. Yeroo bayee hin dagetuu anafi isheen nama garagarati bayee nati jijjiramte , ykn jijjirame jedhuu
Anaaf Abban mana kiyya jalalan akka walin deemu qabnu wali yaddachifna , Nama jiruu kessani kessatti dhufee kana Goftatu isinif kene waan tahef gamaa kessanin fayyaluma kessani yoo mudhiftani waqayyoo isinif wanta bayee kan issin ebbisuni qaba. Tokkon tokkon kessani kabaja wali qabadhaa. Akka mataa kessani kabajamu barbadani isinis kabajaa. Sana booda waqayoo wanta isaa irra egamu hin rawwata achin booda Jalalan jiratuu.
Hamma iddo kana yoo dubisate atuu obsa qabada , “ obsa guddaa qaba jedhi comment godhii jalati”